Bogagga TOP si aad u soo dejiso bilaash Adobe ka dib Saamaynta arrimo Abuurista khadka tooska ah
Markaan la shaqeyno codsiyada jiilka animations-ka iyo fiidiyow nooc kasta ha ahaadee, adeegsiga agabyada dibadda iyo kuwa horay loo sameeyay ayaa aad ugu muhiim ah. Noocan ah soo bixi ama habyaalada Waxay soo bandhigaan tusaalooyin ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan si loo helo hufnaan xagga abuurista fiidiyowyo. Xaqiiqdii, markii aan qaaday tallaabooyinkeygii ugu horreeyay ee arjiga, adeegsiga sheybaaradu aad bay ii caawiyeen. Gaar ahaan haddii aan fursad u helno inaan kala soo baxno qaab-dhismeedyo xirfad-yaqaanno ah iyo waqtiga loo baahan yahay si loo baaro qaab-dhismeedkooda iyo mid kasta oo ka mid ah xuduudaha hawlgalka lagu jiro, wax badan ayaan ka baran karnaa.
Maanta waxaan sameyn doonnaa xulasho yar oo bogag internet ah oo waxtar badan u leh helitaanka noocyadan kheyraadka ah. Dabcan, waa liis furan oo halkan waxaan kugu martiqaadayaa inaad iga caawiso inaan dhammeeyo. Waa maxay bogagga shabakadda ee aad isticmaasho si aad ugu heshid ilaha ugu fiican ee Adobe After Effects?
Boggan wuxuu bixiyaa bangi si caddaalad ah u ballaaran oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo qaabab wax loo saxi karo ah. Waxa ugu fiican oo dhan, marka lagu daro inay gebi ahaanba xor tahay, uma baahna nooc diiwaangelin ama ku biirid ah. Intaa waxaa sii dheer, qalabkeeda kuma xirna nooc ruqsad nooc kasta ah sidaa darteed waxaa loogu isticmaali karaa si xor ah ujeeddooyinka loo arko inay ku habboon yihiin iyadoon loo baahnayn in la xuso qoraaga ama la aqoonsado aqoonsi. Sidoo kale, boggan wuxuu ku siinayaa caawimaad haddii aadan aqoon sida loo saxo shaxanka ama wax dhibaato ah ula qabashada agabkeeda. Dabcan, waa inaad maskaxda ku haysaa inay tahay bog 100% ku qoran Ingiriisiga, markaa haddii aadan aqoon sida loo maro luqadda, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho turjumaan kasta oo khadka tooska ah ku socda.
50 Adobe After Effects casharro
Tusaalooyinka AE ee bilaashka ah
Waxay u baahan tahay diiwaangelin waxayna leedahay saldhig qani ku ah maadada. Qeybaheeda waxaa ka mid ah tusaalooyinka qaraxa, nalka iyo tamarta firfircoonida, xalalka cusub, iyo xulashooyinka caanka ah ee bulshada isticmaala. Mawduucyada ay soo bandhigtay degelkan waxay ku xiran yihiin ruqsad bilaash ah, taas oo ah, xuquuq la'aan. Tani waa lagudarsanayaa maadama aadan u nisbeyn mudnaanta abuureyaasheeda waxaadna si xor ah ugu isticmaali kartaa mashaariicdaada, waxkastoo ay noqon karaan (ganacsi ama ha ahaadeen, xirfadle ama maya iyo iyadoon loo eegin tirada daabacaad ama soo saarid aad sameyso). Xaqiiqdii waa ilo ilo loogu talagalay Adobe After Effects in la tixgeliyo.
Boggan waxaa ku jira dhammaan noocyada arrimo ee ugu fiican dhammaantood, dhammaantood waxay leeyihiin tayo quruxsan oo hufan, waxay si fudud qayb uga noqon karaan mashaariic xirfad leh. Si kastaba ha noqotee, sida aad u maleyneyso, iyagu xor ma ahan, in kastoo markii aan helno aan haysanno dhammaan xorriyadda isticmaalka. Waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo mashruuc ah, fiidiyowyadeenana waa la baahin karaa iyada oo aan xad lahayn oo aan la tixgelin tirada taranka. Waxay u baahan tahay diiwaangelin waana ikhtiyaar in la tixgeliyo haddii aan ku lug yeelan doonno mashruuc xirfad leh.
Shareae waa mid ka mid ah bogagga aan ugu jeclahay in laga helo ilo loogu talagalay Adobe After Effects. In kasta oo ay ku jiraan tiro badan oo ah 100% ilo bilaash ah oo tayo wanaagsan leh, waa qaacido isku dhafan oo aan ku heli karno xalal qiimo sare leh iyo xalal bilaash ah. Waxay u baahan tahay diiwaangelin waxayna leedahay adeegeyaal kala duwan si ay u soo dejiso mashaariicda. Markaan helno ayaynu ugu adeegsan karnaa xorriyad buuxda oo aan cidna kula xisaabtamin. Waxyaabaha ay soo saarto (bilaash ama ha ahaato) waxaa jira tiro badan oo arrimo ah oo ka socda guriga Envato. Dhab ahaan waa lagula taliyay.
Adobe Kadib Saamaynta CC Buugga Isbaanishka
Uma baahna nooc diiwaangelin ah, waxaana ku jira qaab nadiif ah oo nadiif ah. Qeybaha hagitaanka waxaan kaheleynaa waxyaabo diiradda saarey soo-saarka kadib, wararka iyo qaybaha mawduucyada (sanadka cusub, aroosyada, baabtiisyada, maalmaha dhalashada ...). Waxay bixisaa xiriiriyeyaal kala duwan oo damaanad qaadaya soo dejinta mashaariicda mid kasta oo ka mid ahna waxay bixisaa muuqaal demo. Waxay leedahay tiro xalal ah oo si fiican loogu waafajin karo mashruucyada fiidiyowga ee nooc kasta leh. Xaqiiqdii waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Websaydhada TOP si aad u soo dejiso sheybaarada Adobe After Effects oo bilaash ah
Cajiib, waa inaan hada bilaabaa mashruuc!
Waad salaaman tihiin, sidee baan ugala soo bixi karaa sheybaarada fiidiyowga 99templates bilaash ah? Waxba ma heli karo. Ma inaan lahaadaa barnaamij cayiman?
Jawaab ku si Monica Miranda